Kungani i-Outlook evulekile inciphisiwe? - Imicrosoft Outlook
Main > Imicrosoft Outlook > I-Outlook ivula izixazululo ezincishisiwe
I-Outlook ivula izixazululo ezincishisiwe
Kungani i-Outlook evulekile inciphisiwe?
Inkinga yalo msebenzisi ukuthiUmbonokungabakuncishisiwenomakukhulisiwe. Ukuchofoza okuthi Buyisela kubonakala kunjaloukunciphisaiwindi, hhayi ukulibuyisela. Isizathu esijwayelekile kungenxa yokuthi iwindi licindezelwa emaphethelweni wesikrini. Ukushintsha ukulungiswa kwesikrini kungenzeka kube yimbangela yakho, kepha ungayilungisa ngaphandle kokushintsha izilungiselelo zokubonisa.
Sawubona, lo nguGary ovela kuMacMost.com. Kulesi siqephu, ngizokukhombisa ukuthi kungani kungafanele usebenzise inkinobho ephuzi yokunciphisa ukufihla amawindi.
IMacMost ilethwa kuwe ngenxa yeqembu elihle labasekeli. Faka futhi uwine okuqukethwe okukhethekile ku-MacMost.com/patreon.
Ngakho-ke ngisebenzisa ama-Macs angu-60 + amahora ngesonto. Ngiyabhala, ngenza izindatshana, ngenza izinhlelo zokusebenza, ngakha amawebhusayithi, ngenza zonke izinhlobo zezinto ngazo zonke izinhlobo zezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene. Into eyodwa engingakaze ngiyenze ukuchofoza inkinobho encane ephuzi ekhoneni eliphezulu kwesokunxele sewindi.
Ngisabona abasebenzisi beMac bekwenza lokhu ngaso sonke isikhathi. Kepha kuyindlela yasendulo yokufihla iwindi. Kunezindlela ezingcono zokwenza lokhu.
Ngakho-ke ake siqale sibheke ukuthi le nkinobho yenzani. Le yinkinobho encane ephuzi engikhuluma ngayo lapha. Inkinobho yokunciphisa.
Uyazi ukuthi kubizwa kanjalo ngoba lapho siya kumenyu ye-Window, umyalo we-Minimize uyefana lapho usebenzisa i-Minimize, uzobona le nkinobho ephuzi icwayiza. Manje uma ngichofoza kuyo ngokuzenzakalela? Kubukeka sengathi kufinyela iwindi ethekwini futhi ungabona inguqulo yesithonjana esincane sewindi elisethekwini lapha. Ungachofoza kuyo futhi izokubuyisa.
Unganciphisa zonke izinhlobo zamawindi kusuka kuzinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene uye eDokini, bese uqhafaza leyo ofuna ukuyibuyisa, ungashintsha lokhu kuziphatha ngokuya kokuncamelayo kweSystem, bese uya kusithonjana se-Dock, kulokhu amakhasi Ukuletha emuva kufanele ngi ctrl chofoza isithonjana noma chofoza bese ubamba isithonjana bese ngikwazi ukukhetha iwindi lapha futhi lizobuyiselwa, futhi ungaya ewindini bese ulikhetha lapho, ukulibuyisa, noma ngabe likhona kuhlelo lokusebenza icon noma ngakwesokunene kwedokodo. Engikubona abantu bekwenza okuningi basebenzisa le nkinobho ukuthola okuthile endleleni. Ngakho-ke mhlawumbe abanamafasitela amabili avulekile lapha.
Bafuna nje ukukhipha amakhasi endleleni ukuze bakwazi ukuqhubeka nezinye izinto. Ngakho-ke nciphisa iwindi. Ngemuva kwalokho ngibona abantu lapha ngakwesokunene sedokodo benoluhlu lonke lwezithonjana oluncishisiwe.
Kepha kunenye indlela engcono kakhulu kunalokho. Lokho kusho ukuthi fihla uhlelo lokusebenza. Uma uya kumenyu yohlelo lokusebenza uzothola Fihla negama lohlelo lokusebenza lapha.
Isinqamuleli sekhibhodi cishe ngaso sonke isikhathi yi-Command H. Ngakho-ke ungasebenzisa lokhu futhi uhlelo lokusebenza lunyamalale ngesikhathi esithile i-App Switcher. Ngakho-ke bamba ukhiye womyalo bese ukhiye wethebhu uze ufike kuhlelo lokusebenza, bese udedela ukhiye womyalo bese uhlelo lokusebenza luzovela.
Ungaphinda uveze uhlelo lokusebenza ngenkathi uqala uhlelo lokusebenza; lapho ngiya ethekwini bese ngichofoza isithonjana njengokuthi ngivula uhlelo lokusebenza, livela nje ngoba selivele liyasebenza. Noma ngingasebenzisa i-Launchpad noma uhlelo lokusebenza lwemenyu ye-Spotlight futhi uma uhlelo lokusebenza seluvele luyayivula. Into enhle ngayo ukuthi ifihla wonke amawindi ngasikhathi sinye, okuvamise ukuthi kube yilokho okufunwa ngabantu.
Ngakho-ke ngivula idokhumenti yokugcina lapha futhi nginezindawo ezimbili ezivulwe amawindi manje. Uma ngivele ngifuna ukususa amakhasi esikhundleni sokunciphisa womabili, ngingaqhuba i-Command H bese bobabili banyamalala, lapho-ke ngingabuyela emuva kuhlelo lokusebenza futhi bobabili bazovela, ngakho-ke nginamawindi womabili lapho ngasikhathi sinye, okuwukuphela kwenzuzo yokunciphisa kubonakala uma une-windows evulekile ongayifihla enye yazo ngokuyinciphisa, kepha ayisiyinkulu namuhla njengoba beyikhona. Isibonelo, kulula kakhulu ukuvala idokhumenti.
Ukuyivula, vele uye kufayela, vula muva nje bese likhona. Ivula ngokushesha nje njengoba injalo, futhi kuthatha isikhathi ukususa isinciphisi ethekwini futhi. Ngakho-ke ngibona abantu abaningi benemibhalo evuliwe kepha bancishisiwe lapho bengavala nje bese beyivula ngokuzayo lapho beyidinga.
Esinye isizathu sokunciphisa akusadingeki kangako ukuthi asihlali sisebenzisa amawindi amaningi. Eminyakeni edlule bekuyinto evamile, yisho, kusiphequluli ukuthi uvule amafasitela amaningi. Kepha asikwenzi lokho manje.
Sinamathebhu. Ngenza i-Command Tab lapha ukuvula enye ithebhu futhi ungavula amathebhu amathathu, amane, amahlanu bese ushintshela kumakhasi e-web ahlukene kumathebhu Manje yiwindi elilodwa futhi kulula ukufihla lolu hlelo lokusebenza, i-Command H. Akukho ngizuze wena ngokunciphisa, ngaphandle kokuminyanisa ichweba lakho, noma mhlawumbe ukhohlwe nokuthi uvule leli elinye iwindi lapha, kodwa walinciphisa kuphela, walifihla futhi walikhombisa futhi.
Manje sesingasebenzisa amathebhu cishe kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza. Isibonelo Kumakhasi lapha uma bengizovula lo mbhalo wesibili lapha. Impela ngingaba nakho kumawindi ahlukile, kepha ngingawahlanganisa wonke futhi ngiwafake kumathebhu njengasesipheqululini.
ukuvelela ukuhlela konke
Ngemuva kwalokho ukufihla ngingasebenzisa i-Command H futhi-ke ukusebenzisa amathebhu kusho ukuthi ngibona eyodwa ngasikhathi sinye. Ngakho-ke ungacabanga cishe wonke amathebhu ongekho, ngakho-ke kubukeka sengathi ancishisiwe kumathebhu lapha. Enye inketho onayo ukumane uyeke uhlelo lokusebenza, lapha ngivule amathebhu amabili, ngisebenza kumadokhumenti amabili, angidingi ngisho nokonga njengoba ukulondolozwa manje sekuzenzakalela njengoba izinhlelo zokusebenza zesimanje zisebenza, ngakho-ke ngingaya ku-example add okuthile lapha.
Angisoze ngisindise. Engizokwenza ngizokwenza umyalo Q ukuphuma. Manje lapho ngisebenzisa uhlelo lokusebenza futhi, uhlelo lokusebenza lizoqala kabusha futhi libonise lawo mathebhu amabili lapho.
Uyabona ukuthi yonke into isindisiwe, ngakho-ke empeleni awumehluko omkhulu phakathi kokuyeka nokufihla noma ukunciphisa. Uma lokhu kungasebenzi ngokufana ncamashi kuwe, iya kokuncamelayo kwesistimu futhi ngaphansi kokujwayelekile kukhona ibhokisi lokuhlola iwindi lokuvala lapho uhlelo lokusebenza luphuma Ufuna ukuqinisekisa ukuthi icishiwe. Ufuna nokuthi ucishe ukuthi izinguquko kufanele zigcinwe lapho uvala amadokhumenti.
Lokhu kugcinwa ngokuzenzekelayo. Vele, lokhu akusebenzi nezinye izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni. Ezinye izinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle zingaphikelela ekubuzeni ngaphambili ukuthi ngabe ufuna ukulondoloza okuthile okuphuma kuhlelo lokusebenza.
Ngakho-ke, ngokuyisisekelo, ngincenga lapha ukuthi ngiyeke ukusebenzisa inkinobho yokunciphisa e-Command H ukufihla uhlelo lokusebenza uma ufuna ukulisusa, noma vele uyeke uhlelo lokusebenza wazi ukuthi ungaliqala kabusha, futhi libuyisa imibhalo usebenze kuma-desktops.
Ngithola kanjani ukuthi i-Outlook ivulwe ngokuphelele?
Ungachofoza kwesokudla kufayela le-Umbonoisinqamuleli, lapho-ke ungathola ibhokisi lokuqalisa ngaphansi kwethebhu yesinqamuleli, khethaKukhulisiwebese uqinisekisa umphumela.4 Ephreli. 2018
Sawubona, lo nguGary ovela kuMacMost.com. Namuhla ngizokukhombisa izindlela ezintathu ezehlukene ongakhulisa ngazo iwindi kwi-Mac.
I-MacMost yethulwa kuwe ngenxa yeqembu elikhulu labantu abangama-700 +. Iya kuMacMost.com/patreon ukuze ufunde kabanzi ngomkhankaso wePatreon Funda.
Sijoyine Ngokuthola Izaphulelo Zokuqukethwe Okukhethekile Nesifundo. Imvamisa, abasebenzisi beMac bafuna ukukhulisa iwindi esikrinini sabo. Lokhu kungasho izinto ezintathu ezihlukile futhi imvamisa lokho abantu abakufunayo ngempela ukukhulisa indlela yesithathu Kepha ezimbili zokuqala zingakuthola.
Ake ngichaze. Ngakho-ke lapha nginombhalo wamakhasi ovulekile kuhlelo lokusebenza lwamakhasi. Manje ngifuna lokhu ukugcwalisa isikrini.
Kunezindlela ezimbili ezisobala zokwenza lokhu ukwenza lokho abantu abavame ukuya kuzo, kepha akekho noyedwa kubo obanikeza umphumela abawufunayo. Okokuqala ukuchofoza nje leyo nkinobho eluhlaza lapha. Uma wenza lokho kuzoya kumodi yesikrini esigcwele.
Manje lapha ungabona ukuthi empeleni ngihambisa isikhombisi lapho kunginikeza inketho futhi nginike amandla imodi yesikrini esigcwele lapho inketho yokuqala ikhona. Ngemuva kwalokho ezinye izinketho r ezifana nokuThayela kwesobunxele nakwesokudla. Ngakho-ke, ukuchofoza leyo nkinobho eluhlaza noma ukukhetha u-Enter Full Screen kwenza into efanayo.
Ungaya futhi ku-Buka. Imvamisa kukhona umyalo we-Enter Full Screen onenhlanganisela yokhiye. Uthatha iwindi ngemodi yesikrini esigcwele.
Ibha yemenyu iyanyamalala. Uma ngabe ubune-dock lapho, iyanyamalala. Kuthatha yonke into.
Lokho okwenzile empeleni ukudala uhlelo lokusebenza lesikrini esigcwele. Uma ungena ku-Mission Control usebenzisa ukhiye we-Ctrl nomcibisholo ongaphezulu lapha ungabona ukuthi unedeskithophu yakho namakhasi ohlelo lokusebenza esigcwele. Ubuyela kudeskithophu yakho futhi mhlawumbe unezinye izinhlelo zokusebenza ezisebenza lapho futhi ungaya ku-Control up arrow emuva kumakhasi.
Ungasebenzisa futhi i-Control Left ne-Control Right. Kepha inhloso bekungekhona ukwenza uhlelo lokusebenza olugcwele isikrini. Kwakulula ukwenza iwindi libe likhulu ngangokunokwenzeka.
Ngakho-ke ake siphume kumodi yesikrini esigcwele lapha, ngikwenza lokhu ngokuhambisa isikhombisi sami lapha bese ngichofoza inkinobho eluhlaza futhi. Into yesibili abantu abayenzayo ukusebenzisa iWindow, Zoom. Ungabona iWindows, Nciphisa ukubeka iwindi edokini.
Kukhona i-Zoom abantu abaningi abacabanga ukuthi yindlela ye-Mac yokwenza ukukhulisa. Kepha uma ngikhetha ukusondeza yilokhu engikutholayo. Akuzange kukhuliswe nakancane.
Kwenzeni? Yebo, ikhulise kahle iwindi, kepha yafika ezingeni lokudingekayo ngewindi. Ngakho-ke ake sisondeze futhi ukubona ukuthi lokhu kuzobuyela emuva ini; uyabona lapha, idokhumenti inekamelo elithe xaxa lapha ngakwesobunxele nangakwesokudla. Amabha asemaceleni ngosayizi ogcwele.
Ngakho-ke lapho ngisondeza isithombe, iwindi empeleni lalinganiselwa kusayizi omkhulu owawudingeka lapha. Idokhumenti lapha emakhasini isayizi ephelele, yonke into iyalingana, ngeke uphuthelwe lutho. Okudidayo lapha ukuthi kwezinye izinhlelo zokusebenza, lapho wenza iwindi elifanayo, i-Zoomit empeleni igcwalisa isikrini.
Kulokhu, kuhlelo lokusebenza lweMephu, unale ndawo enkulu eguquguqukayo lapha. Lokhu kuzokwandisa iwindi ngangokunokwenzeka ukulingana isikrini, ukuze ngisebenzise ukusondeza ukuguqula phakathi kwalezi zindlela. Enye indlela yokufika ekusondeni ukucindezela kabili ibha yesihloko futhi ngokusobala ugweme zonke izinkinobho.
Futhi, uma ubamba ukhiye we-Option lapho uhambisa isikhombisi sakho kunkinobho eluhlaza, uzobona lolu shintsho ku-Zoom. Ungakhetha lokhu, noma ungavele ukhethe u-Option bese uqhafaza inkinobho eluhlaza bese uzosondeza lapho futhi. Nasi esinye isibonelo.
NgeSafari ngichofoza kabili kusihloko. Kubha ungabona ukuthi akusondeli kusayizi omkhulu. Iwindi kuphela elikhuliselwe kusayizi omkhulu odingekayo ukuze ubuke kahle amakhasi e-web.
Inkinga ngokusondeza isezimweni ezinjengalezi. Zonke lezi zinketho; Qhafaza kabili ibha yesihloko noma chofoza inkinobho eluhlaza ukukhulisa iwindi kuphela ngangokunokwenzeka. Iwindi ngeke ligcwalise isikrini sonke.
Ngakho-ke indlela yesithathu iyindlela engaguquguquki yokungivumela ngikubonise indlela enzima manje. Indlela enzima ukuhudula izinhlangothi zefasitela bese ugcwalisa konke, noma usebenzise amakhona ewindi - ngikwazi ukusebenzisa amakhona ewindi lapha - ngidonsela ekhoneni elingenhla kwesokunxele liye phezulu ngakwesokunxele, donsela ikhona elingezansi kwesokudla phansi ngezansi kwesokudla. Manje ngithola engikufunayo.
Kepha lokho kuyizenzo eziningi ukufeza lokho. Ingabe ikhona indlela esheshayo yokwenza lokhu? Kuvela ukuthi kukhona eyodwa. Bona, uma ubamba ukhiye we-Option bese uhudula okuthile, kuzohudula lelo hlangothi nohlangothi olubhekene nalo.
Isibonelo, uma ngihudula uhlangothi lwangakwesokudla lwewindi lapha, ungahle ubone ukuthi lidonsa kuphela uhlangothi lwangakwesokudla lwewindi. Kepha uma ngibamba ukhiye we-Option bese ngihudula uhlangothi langakwesokudla, ungahambisa uhlangothi lwesobunxele ngayo. Kuyafana lapho ngidonsa eyodwa engezansi.
Kepha uma ngibamba ukhiye we-Option, phansi naphezulu kuhamba ndawonye. Lokhu kusebenza namakhona. Ngakho-ke uma ngidonsela ekhoneni elingezansi kwesokunxele, ungavele uyibone ibona ikudonsa lokho.
Kepha lapho ngibamba inkinobho ethi Option, amakhona angezansi kwesokunxele nangaphezulu kwesokudla ahudulwa. Amakhona aphambene adonswa ngasikhathi sinye. Manje qaphela futhi ukuthi lapho uqhafaza kabili ohlangothini noma ekhoneni, yonke into iyangena esikhundleni sokuhudulela indlela yakho onqenqemeni.
Ngakho-ke ngikwazi ukuchofoza kabili ohlangothini lwesobunxele lapho futhi ungayibona ingena endaweni ohlangothini lwesobunxele. Ngingachofoza kabili phezulu bese iyachofoza. Uma ngichofoza kabili ekhoneni eliphezulu kwesobunxele uthi lingena endaweni ephezulu ngakwesokunxele.
Ngakho-ke lapho ngihlanganisa lezi zinto ezimbili, bamba ukhiye we-Option bese uqhafaza kabili kunoma iyiphi ikhoneni, okwenzekayo ukuthi leli kona ligoqeka ekhoneni lesikrini kanti elinye eliphambene nalo lishaya ekhoneni lesikrini. Ngakho-ke, ngivumele ngichofoze kabili ekhoneni eliphezulu kwesobunxele futhi uyabona ukuthi manje isithombe sesigcwalisiwe. Lokhu kusebenza nganoma iyiphi ikona njengoba ikhona ngalinye kanye nekhoneni eliphambene nophetho lwesikrini luzogcwalisa isikrini.
Ngakho-ke uma ufuna ukunweba iwindi ukuze ugcwalise isikrini sonke kepha ushiye ibha yemenyu lapho, ushiye amanye amawindi afihliwe ngaphansi, lapho-ke okumele ukwenze chofoza kabili inketho kunoma iliphi ikhona lewindi futhi izogcwalisa isikrini ngalelo windi. Ukuhlola lokhu, ungaqala ukukhulisa iwindi ngemodi yesikrini esigcwele. Chofoza inkinobho eluhlaza manje yideskithophu yesikrini esigcwele.
Uma ufuna ukusondeza isithombe, esizokhulisa ifasitela ngendlela oyidingayo ngayo, khetha iWindow, Zoom, noma ubambe inkinobho ethi Option bese uqhafaza inkinobho eluhlaza noma chofoza kabili ibha yesihloko. Uma ufuna ukuthi iwindi ligcwalise isikrini ngaphandle kokuqukethwe yiwindi, chofoza kabili kwelinye lamakhona amane.
Ngiyithola kanjani i-imeyili yami ukuvula isikrini esigcwele?
Iskrini esigcweleInketho ku-iUkuqanjwa kwe-Gmail okushaIwindi
1) Chofoza Bhala, bese uqhafaza ukuthi kubukeka kanjani njengomcibisholo osayizi oniekhoneni eliphezulu kwesokudla. ...
2) Uma ufuna lokhu kube inketho yakho ezenzakalelayo, chofozaiumcibisholo obheke phansi, bese ukhetha u- “Okuzenzakalelayo ukuzekugcwele-isikrini'
Kugcine ukubuyekezwa: 07/28/15.
13 jana. 2020
- Ungathanda ukubonisa ibhokisi lakho lokungenayo ngendlela ehlukile, ufuna ukwenza ngokwezifiso ukubuka kwakho khona lapha ku-Gmail ukuze ivumelane kangcono nesitayela sakho, noma ngabe ukhathele ukubona izinto ezifana nalezo ezihlangana nezokuxoxa, ikakhulukazi uma ungazisebenzisi lokhu ukuze ubone wonke amalebula akho ngakwesobunxele? Esihlokweni sanamuhla ngifuna ukukukhombisa zonke izindlela ezahlukahlukene ongabuka ngazo nokuxhumana nemilayezo yakho khona lapha ku-Gmail, kodwa okokuqala ngifuna ukukubonga kakhulu kumxhasi wanamuhla. I-SaneBox, i-SaneBox iyithuluzi le-imeyili elikusiza ukugcina ibhokisi lakho lokungenayo lilawulwa. Kungani ama-imeyili ambalwa kangaka lapha? Lokhu kungenxa yokuthi i-SaneBox isebenzisa i-Artificial Intelligence ukuhlunga ama-imeyili angabalulekile avela ku-imeyili yami njengoba ifunda ukuphatha imilayezo yami.
Ukuzama iSaneBox ngokwakho bese uthola isikweletu esikhethekile, iya ku-sanebox.com/simpletivity. Ukuze sikwazi ukushintsha ukubuka kwethu ku-Gmail, konke okumele sikhuphuke lapha kusithonjana segiya.
Muva nje le ndawo yezilungiselelo isishintshile ngakho-ke uma ufuna ukubona zonke izilungiselelo zakho ungafika lapha uthi, 'Khombisa zonke izilungiselelo', kepha nge-Gmail sekuvele kwaba lula kakhulu kithina ukushintsha imibono yethu ehlukile. Eziningi zalezi azizintsha, kepha zibekwe endaweni elula kakhulu ukuthi siyisebenzise. Lapha inketho yethu yokuqala ukuminyana.
Futhi ngokuzenzakalela, lokhu empeleni kungumbono ozenzakalelayo. Umehluko omkhulu lapha ekuguqulweni okwenziwe i-Gmail eminyakeni embalwa eyedlule ukuthi uma unesinamathiseli esifana nalesi osibona lapha ku-Standard View, leso sinamathiselo sivela kulayini ohlukile lowo mlayezo othile ugxuma ngempela uphume. Lokhu kungasiza manje ngoba ngingaqonda ngqo kokunamathiselwe, angidingi ngisho nokuvula i-imeyili.
Lokhu kusiza kakhulu lapho sengivele ngilindele idokhumenti engingadingi ukuyibona, noma kunjalo, izindaba zingakhathaza kancane ngicabanga kwezinye izimo ngoba lokho kuyabambelela. Futhi uma unokunamathiselwe okuhlukile okumbalwa lapha, yeqa ubaphumele ngaphandle bese ubheka kabili noma mhlawumbe kathathu ubukhulu beminye imilayezo ohlwini lwakho. Sisakwazi ukubona isiqeshana sephepha lapho esikhombisa ukuthi sinokunamathiselwe kulowo mlayezo.
Uma ufuna ukuba mncane kakhulu, ungakhetha i-Compact bese unemiyalezo eminingi esibukweni esiphambi kwakho. Okwami, ngivame ukukhetha okuhle, ngakho-ke ngizokuyeka lapho. Ngeke ngichithe isikhathi esiningi kuzindikimba, ngisebenzisa ingqikithi ezenzakalelayo lapha, kepha uma ufuna okuthile okuthokozisayo, noma uma ufuna ukulayisha isithombe sakho njengesizinda, ungakwenza lokho esigabeni samatimu lapha.
Kepha okuhle kwangempela kwehla lapho singakhetha phakathi kwezinhlobo ezahlukahlukene zebhokisi lokungenayo. Manje lokhu ngumbono wethu lapha futhi ngokuzenzakalela. Sizokwenza imilayezo yethu emisha ivele phezulu, ibhokisi lokungenayo eliqonde ngqo nelilula.
Kodwa-ke, singakhetha olunye uhlobo lwebhokisi lokungenayo lapho sinama-imeyili wethu abalulekile kuqala. Ngakho-ke lapha uyabona ukuthi izinto sezihlukanisiwe. Noma yini enanoma iyiphi yalezi zimaki ezibalulekile izovela lapha phezulu ohlwini lwami, phezulu ebhokisini lami lemilayezo engenayo, bese ngiba nalesi sigaba esibizwa ngokuthi i-Everything Else.
Manje usungazinciphisa kalula noma uzikhulise lezi zindawo uma ufuna, kepha lokhu kungasiza kakhulu lapho usebenzisa lowomaka obaluleke kakhulu ukuze imilayezo yakho engafundiwe izovela ngokuzenzekelayo phezulu futhi noma yini oyivule ngaphambili noma oyibonile izoboniswa ngezansi. Inketho yethu yesithathu lapha ihlobene nenkanyezi kuqala. Ngakho-ke uma usebenzisa lezo zinkanyezi, noma mhlawumbe unezihlungi noma imithetho ethile yokuthi lezo zinkanyezi ziya kuphi, khona-ke lezo zinkanyezi nazo zizovela phezulu.
Futhi into enhle ukuthi ungakwenza lokhu ngamandla, akudingeki ukuthi Usethe lokhu njengebhokisi lokungenayo lakho sonke isikhathi lapho ungahlala ukhetha isithonjana segiya bese uza lapha bese ukhetha okukusebenzela kangcono. Okulandelayo, sinebhokisi lokungenayo elibaluleke kakhulu eliveza izinto eziningi ezahlukahlukene. Lapha sinokubalulekile futhi akufundiwe ngenhla, lapho-ke sinokuMaka nakho konke okunye.
Ozokuqaphela lapha uma kukhulunywa ngokubekwa phambili, amabhokisi wokungenayo amaningi, kanye nezinga lokuqala, ukuthi singachofoza njalo kuleyo nketho yokwenza ngokwezifiso lapha. Ngakho-ke lapha ngingakhetha engifuna ukukukhombisa ngaphakathi kwaleli bhokisi lokungenayo elibalulekile. Ngakho-ke, uyazi ukuthi yiziphi izigaba ezahlukahlukene engifuna ukuzibonisa lapha? Ungakhetha okuthandayo ngaphakathi kwendawo yezilungiselelo ezivamile.
Ungakwenza lokhu nakwezinye izinhlobo zebhokisi lokungenayo, kepha ake sibuyele emuva kubhokisi lethu lokungenayo, ngizochofoza isithonjana segiya ukuze sibuyele kulolo hlobo lwebhokisi lokungenayo. Amabhokisi wokungenayo amaningi, futhi afana kakhulu nalokho esikubonile ngaphambili. Kulokhu kuhlungwe ngezindlela ezimbalwa ezahlukahlukene.
Nginezihlungi ezimbalwa ezihlukile, ezimakiwe, okusalungiswa, ibhokisi lokungenayo, kepha ngiyakwazi ukwenza ngendlela oyifisayo nganoma iyiphi indlela engiyifunayo. Ekubonisweni kwanamuhla, ngizobuyela kulesi silungiselelo esizenzakalelayo ojwayele ukusenza lapha, kepha ngiyazi ukuthi abantu abaningi abazazi zonke izinhlobo ezahlukahlukene zamabhokisi wokungenayo abangawamisa kanye nokwenza ngezifiso eza nazo. Manje okulandelayo kungabaluleka ngempela kini okungenzeka ukuthi nivela ezweni le-Microsoft Outlook.
Futhi enye yezinto engizwa njalo ukuthi uScott, ibukeka yehluke kakhulu futhi ngingathanda ukubona izindaba, ngifuna ukuxhumana nomyalezo, kepha futhi ngibone yonke i-imeyili yami. Okujwayelekile impela emhlabeni we-Outlook. Ngeke ube nokwehlukana, uzobona nje le milayezo futhi uma ngifuna ukungena kulo myalezo ngiyawuvula bese kufanele ngibuyele ngibuyele emuva ebhokisini lami lokungenayo.
Kepha sinezinye izinketho ezimbili zeFasitelana lokuFunda lapha. Owokuqala ungakwesokudla kwebhokisi lokungenayo. Ake ngikuvale lapha umzuzwana futhi uma ungathanda ukuthi ungumsebenzisi we-Outlook, mhlawumbe uyakwazi lokhu.
Lapha ngingakhetha isithombe, noma ngiyaxolisa ukuthi ngingakhetha umyalezo ngakwesobunxele bese ngiyakwazi ukufunda, ngingaphendula, ngenze engifuna ukukwenza, ngingaya kumyalezo olandelayo, ngingenza lolu hlu lukhuphuke nangaphansi futhi ngiyakwazi ukuxhumana nomyalezo wami lapha ngakwesokudla. Kepha singakhetha nombono ohlukile, singaya e-inbox lapha. Ngakho-ke lapha ungakhetha, ungahudula ubone ukuthi mingaki imiyalezo ofuna ukuyibona phezulu kwesikrini.
Futhi-ke ungabona umlayezo wakho ngezansi bese uxhumana nawo phansi lapha Umbono ngukuthi kwesinye isikhathi leyo mpendulo nokudlulisa phambili, ezinye zalezo zinkinobho ezishisayo ezingezansi, zizofihlwa kancane kuye ngosayizi wesikrini onawo. Kepha futhi, ungakudonsela phezulu naphansi njengoba ufisa. Kepha kunenye into engingathanda ukuyiveza lapha ukuthi akudingeki ukuthi ufike ngaso sonke isikhathi kusithonjana segiya ukwenza lolu shintsho.
I-Gmail muva nje iphinde yenza lokhu kwaba lula kithi lapha ngokusinikeza amandla okushintsha phakathi kwalezi zindlela. Isibonelo, ngingabuyela ngokushesha ekuhlukanisweni, noma ekuhlukaneni okumi mpo, noma ekuhlukaneni okuvundlile, ngokuya ngemizwa yami (egigithekayo), kuya ngokuthi ngisebenza kanjani, kuya ngosayizi wesikrini. Akudingeki ukuthi ngaso sonke isikhathi ukhethe isithonjana segiya, nawe ungafika lapha.
Ngakho-ke into yokugcina engifuna ukuyikhombisa lapha inketho yokufaka imicu ye-imeyili ezansi impela kwalezi zilungiselelo ezisheshayo, futhi ngokuzenzakalela okukhethiwe, Ukubukwa Kwezingxoxo. Ngokufingqa, yonke imicu yakho ye-imeyili iqoqwe ekubukweni kwengxoxo. Ngakho-ke uma unengxoxo ebuya naphambili phakathi kwabantu ngentambo efanayo ye-imeyili, izoyigcina iqine.
Ngeke uwabone njengama-imeyili ahlukile. Kulesi sikhathi esiphila kuso ngikuthola kuxaka ngempela, noma ngithola impikiswano enzima impela ukucisha lokhu, ngoba uma kungenjalo uzobe uphendula i-imeyili okungenzeka ukuthi ayiyona yakamuva ku-p ngingakukhuthaza ezimeni eziningi ukuthi uhambe lokhu kuqhubeke. Kulungile manje ithiphu lebhonasi njengengxenye yendatshana yanamuhla evela ohlangothini lwesobunxele kwesikrini.
Izinto ezimbalwa okufanele uzikhumbule ukuthi ungahlala njalo ulinciphisa lolu hlangothi lwesikrini ngoba sibheke ukwahlukana okuhlukahlukene futhi siguqule amawindi lapha. Uma ungafuni ukubona wonke lawa amalebula, ungavele uwanciphise bese ukhetha i-hamburger encane, isithonjana semenyu enkulu ngaphezulu kwesobunxele kwesikrini. Futhi uma umane uzulazula phezu kwayo, izokwanda ngokuzenzakalela.
Futhi-ke sengingabuya lapha, lokho kunginikeza indawo engaphezulu kakhulu njengengxenye yebhokisi lemilayezo engenayo le-imeyili. Kepha ake ngiphinde ngiyivule leyo, okunye okungikhungathekisayo ukuthi leli windi lokuhlangana nelokuxoxa livela ngokuzenzakalela. Futhi ngiyazi ukuthi iningi lenu alisebenzisi noma yiziphi zalezi zici, noma okungenani anisebenzisi noma yiziphi zalezi zici.
Awuzisebenzisi kaningi. Futhi lokho kungenza ukuthi phezulu kwesikrini kube nokuxinana ngoba kuzofanela udlule lapha futhi ungahle ube namalebula amaningi njengoba ubona nginawo lapha kule akhawunti yedemo. Futhi ngifuna ukwazi ukubachofoza kalula.
Sikususa kanjani ukuhlangana nokuxoxa? okumele ukwenze ukufika lapha, ubuyele ezithombeni zamagiya, kepha sizothi khombisa zonke izilungiselelo. Futhi lokho kusivulela esikrinini esikhulu sezilungiselelo futhi phezulu, ngasekupheleni, sizoba nendawo yengxoxo ne-Meet lapho singakhubaza zombili noma eyodwa yalezi zindawo. Ngizokhubaza zombili okwamanje, ungakhohlwa ukugcina izinguquko.
Futhi manje isikrini sethu siyaqabula, buyekeza i-akhawunti yethu ye-Gmail futhi sibheke lokhu, ngikwazi ukufinyelela wonke amalebula ami, angidingi ngisho nokuskrolela kude kakhulu. Ngakwesokudla, ngikwazi ukufinyelela wonke amalebula ami lapha ngakwesobunxele. Manje, uma ufuna ukuthola okuningi nge-Gmail, bheka i-athikili yami engezansi lapho ngikukhombisa khona izilungiselelo eziyisikhombisa wonke umsebenzisi we-Gmail okufanele azi.
Ukukhiqiza akudingeki kube nzima. Eqinisweni, kulula kakhulu.
Ngimisa kanjani amawindi ekuvulekeni ancishisiwe?
Chofoza ithebhu ethi 'Okuthuthukile' kuzakhiwo zesistimuiwindibese uchofoza inkinobho 'Izilungiselelo' ngaphansi kokuSebenza. Susa ukumaka ku- “Animateamawindininiukunciphisanoma ukwandisa 'lapha bese uchofoza' KULUNGILE '.5 Mashi. 2020
- Lawa amathiphu we-hacker yasendlini, amaqhinga alula okukusiza wonge isikhathi ngenkathi wenza impilo yakho yansuku zonke. Namuhla izinqamuleli zeWindows. (Umculo Wezimboni) Manje, uma ungumsebenzisi we-Mac ungakhathazeki, siyabathanda bobabili, yingakho sikubekele lapha, chofoza i-athikili noma uhlole incazelo bese ungathola zonke izinqamuleli ezinhle ze-Mac Manje konke esimweni lapho sibheke okuthile kukhompyutha yethu futhi kufanele kuqale khona manjalo ngoba mhlawumbe kukhona umuntu ohamba ezansi ehholo noma mhlawumbe umphathi wakho uhamba ebhekise kubhande lakho, akunandaba ukuthi kufanele kuhambe.
Nansi isinqamuleli esilula sokwenza lokhu ngokushesha, okumele ukwenze nje ukubeka umunwe wakho kukhiye weWindows nokhiye ka-D bese ucindezela ngasikhathi sinye. Boom, ubuyele kudeskithophu, lapho ungazenza sengathi wenza enye into, uthanda ukuyibiza, bese uvula amathebhu angama-50 ngezinto eziningi ezahlukahlukene, kepha uyazi ukuthi kukhona ukungenisa intuthwane okukhona, kepha wena Sivule kakhulu kakhulu ngakho-ke uqala ukuvala, ukuvala, ukuvala, ukuvala, futhi lapho kuhlanzwa uthola ukuthi uvale ithebhu oyidingayo, kahle, ngaleyo ndlela enqamulelayo, konke, okudingeka ukwenze cindezela u-Ctrl + Shift + T khona kanye esipheqululini sakho. Lokhu kusebenza kunoma yisiphi isiphequluli esithandwayo, uyazi, IE, Firefox, ne-Chrome.
Ngakho-ke cindezela u-Ctrl + Shift + T futhi kuzovula wonke amathebhu wakho abekade evaliwe, eyodwa ngasikhathi, uze uthole lokho okudingayo ngqo. Nansi indlela enhle yokususa imfuhlumfuhlu yewindows kudeskithophu yakho bese ubeka amawindi amabili eceleni ukuze uqhathanise. Khetha iwindi esikrinini sakho bese ubamba ukhiye weWindows, manje cindezela umcibisholo wesobunxele noma umcibisholo wesokudla futhi usazohambisa kulelo khasi.
Yenza lokhu kwelinye iwindi futhi unokuqhathanisa okuhlangene. Lokhu kuyasebenza futhi uma ufuna ukukhulisa iwindi, mane ushaye umcibisholo ophezulu, futhi uma ufuna ukuwunciphisa, cindezela umcibisholo obheke phansi. Uma uke wabhala i-imeyili kungxenyekazi eku-inthanethi efana ne-Gmail, kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi uma ukopisha okuthile kwelinye ikhasi bese ukunamathisela ku-imeyili yakho, konke ukufomatha kuyagcinwa okungaba ifonti, umbala , ngosayizi wombhalo.
Lokhu kungabukeka kungajwayelekile kakhulu uma ukunamathisela lapho futhi ufuna ukukuthumela. Manje ufuna yonke into ibukeke ifana. Nakhu ukuthi ungakwenza kanjani lokho.
Esikhundleni sokushaya i-Ctrl + V ukuze unamathisele, cindezela ku-Shift + Ctrl + V, izonamathisela umbhalo ongahluziwe ngqo ku-imeyili yakho, futhi ungawudlala njengokuzibhalela into embi. Ukuthatha isithombe-skrini kuWindows bekuyinkinga enkulu ukulanda ithuluzi le-Snap noma chofoza i-Print Screen, ulinamathisele ku-Paint bese ulithumela njengesithombe. Uma ufuna ukuthatha ngokushesha isithombe-skrini sefasitela okulo okulo, vele ushaye i-Alt + Print Screen, izokwakhela ifayili bese ikukhombisa ukubuka kuqala kwalokho osanda kukuthumba.
Lokhu kungenziwa futhi kusikrini sakho sonke ngokubamba phansi ukhiye weWindows bese ucindezela i-Print Screen. Ngokuzenzakalelayo, izithombe zigcinwa kufolda yakho yezithombe. Kulungile, ucwaninga noma ubhala ngempela, awufuni ukuthi umuntu akubone, kepha kufanele uhambe.
Ufike sekwedlule isikhathi kulo mhlangano noma abangani bakho beya esidlweni sasemini, kufanele uphume ngomnyango khona manje. Yebo, thula, shaya nje ukhiye wewindows bese ushaya l, yilokho kuphela okumele ukwenze, kuzokhiya isikrini sakho, ungasukuma, uqhubeke, kuze kube manje sikhulume ngezinqamuleli zekhibhodi kuphela, manje thina letha igundane kuMxube omncane. Lapho udinga ukwenza ikhophi lefayela asikho isidingo sokukopisha nokunamathisela, mane ubambe ukhiye we-Ctrl bese uhudulela ifayela.
Kwakha impinda ngokushesha lapho ukhipha inkinobho yegundane, yinhle. Uma ushaye okuningi ku-inthanethi manje, uzokwazi ukubaluleka kwamagama aklanywe kahle nohlelo lolimi olufanele. Manje kwesinye isikhathi ubuyela emuva ubheke okuthunyelwe kwakho bese uthola, oh, ngikuphazamisile lapha, bengingacasula kakhulu futhi ufuna ukubhekana nalelo galelo lokugcina.
Manje kungathatha isikhathi eside ukushaya ukhiye we-backspace ukulungisa amagama, kepha uhlamvu ngohlamvu, ukubamba ukhiye we-Ctrl kungasula wonke amagama nge-swoop eyodwa. Kuyisilondolozi sesikhathi esikhulu, ikakhulukazi uma usanda kuhlola amagama afanayo ngokuthuka kwakho okungenabungozi futhi ufuna ukushintshanisa amagama amaningi noMshini? Lesi isinqamuleli esihle futhi esilula ukukhulisa ngokushesha usayizi wesikrini. Vele ugcine inkinobho evulekile yeWindows bese ucindezela inkinobho yokuhlanganisa ukuze usondeze ngokushesha.
Ungabuyela emuva ngokucindezela inkinobho yokukhipha. Lokhu kufanele kusebenzele noma yiluphi uhlelo lokusebenza olusebenza kusuka kudeskithophu. Ngakho-ke ungafinyelela ngokushesha kuma-hard drive wakho noma yikuphi kusistimu yakho.
Lokhu kubuyela ekubukweni konke okungamafasitela. Ngakho-ke noma kunini lapho usebenzisa isistimu yakho, mane ubambe ukhiye weWindows bese ucindezela u-E. Lokhu kuzovula umkhombandlela we-My Computer futhi kukunikeze ukufinyelela okusheshayo kumadrayivu akho ngaphandle kokushintsha ezinye izinto onazo Ngakho-ke lawa ama-Windows wethu ayi-10 athandwa kakhulu izinqamuleli ezisobala ezomhlaba wonke manje, ngakho-ke zizosebenza kuWindows 7, 8, 9, 10, 11, 12, manje ziyini, 16? - Yebo ngicabanga kanjalo. - Kulungile, bengicabanga kanjalo, Windows 16, nawe ulungile lapho, manje ngicela, shiya okwakho kumazwana, wabelane ngawo nawo wonke umuntu, futhi sizokubona ngokuzayo.
Ungavula kanjani ukubuka ewindini elincishisiwe Windows 10?
Windows 10, Office 2013. Uma ngivula i-Outlook ivuleka kusithonjana esincishisiwe kubha yomsebenzi. Okulandelayo, ngikwazi ukubeka i-mousepointer kusithonjana, chofoza kwesokudla, selsct 'maximize', bese ngaleyo ndlela ngithola ukuvula iwindi. Okwamanje lapho ngizama ukukhulisa usayizi noma ukuhambisa iwindi 'liwela' emuva kusithonjana futhi.
Ngilutholaphi inkinobho yokuNciphisa ekubukeni?
Ebhokisini lezingxoxo ze-Outlook Properties, khetha Okuncishisiwe ohlwini lokudonsela phansi lwe-Run ngaphansi kwethebhu yesinqamuleli, chofoza inkinobho ethi Faka isicelo bese uchofoza inkinobho ka-OK.
Kungenzeka yini ukuvula i-imeyili efomini elincishisiwe?
Lapho ngivula i-imeyili entsha ukuphuma kolayini futhi i-imeyili ivula empeleni ifomu elincishisiwe kubha yomsebenzi. Incane kakhulu awukwazi ukuyifunda futhi okuwukuphela kwento ongayenza kuyo ukuyivala nge-x encane ebomvu ekhoneni.
Ngingayinciphisa kanjani indlela yokubuka itreyi yesistimu?
Qaphela: Ukunciphisa ukubukwa kwetreyi yesistimu, sicela uye ku-Isaziso Area kukhompyutha yakho, uthole isithonjana se-Outlook bese usichofoza ngakwesokudla, bese unika amandla umsebenzi wokuCasha lapho uncishisiwe njengoba isithombe esingezansi sikhonjisiwe. I-Kutools ye-Outlook - Iletha Izici Ezithuthukisiwe eziyi-100 ku-Outlook, futhi Yenza Umsebenzi Ube lula Kakhulu!